के हो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी ,जसले ज्याननै लिन सक्छ ? – Ishan Hospital
अझै पनि धेरै मानिसलाई थाँहा छैन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अर्थात पाठेघर बाहिर बच्चा बस्ने समस्याको बारेमा । थोरै मात्र असावधानी अप्नाए ज्याननै जान सक्ने यो समस्या पछिल्ला केही वर्षयता निकै बढेको पाइन्छ । के हो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी ? कसरी यस्तो हुन्छ र अप्नाउनुपर्ने साबधानीको बारेमा अंकुरण खबरका लागि स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ डा. माला श्रेष्ठ यसो भन्छिन् … एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको के हो ? एक्टोपिक शब्द भनेकै असामान्य भन्ने हुन्छ । पाठेघरभित्र बच्चा नबसेर बाहिर बस्नुलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनिन्छ । एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा ९० प्रतिशतको बच्चा पाठेघरको नली वा ट्युवमा बस्छ । कसैकसैमा पेट भित्र पनि बस्न सक्छ । कस्ता महिलामा यस्तो समस्या बढी आउँछ ? गर्भधारण भैसकेपछि शुक्रकिट पाठेघरको नली हुदै पाठेघर भित्र जान्छ । तर जो महिलामा पाठेघर या यी अंगमा संक्रमण छ भने बाटोमा अबरोध हुन्छ र शुक्रकिट सहजै पाठेघर भित्र छिर्न पाउदैन् । त्यसले गर्दा मुखमा नै बस्छ । विशेषतः १. पाठेघरको पहिला संक्रमण भएर ट्युबमा क्षति भए । २.ट्युब,पेट तथा तल्लो पेटको पहिला शल्यक्रिया भए । ३. बाँझोपनको उपचारबाट गर्भ रहेकोभए । ४.पहिले पनि पाठेघर बाहिर गर्भ रहेको भए । ५. गर्भ निरोधक साधान कपर टीको प्रयोग । ६.ढिलो विवाह गरेका महिलामा यस्तो समस्या बढी हुन्छ । यसका लक्षणहरु के कस्ता देखा पर्छन् : १.महिनावारी रोकिने । २.पेट दुख्ने । ३.योनीबाट रगत जाने । ४. वाकवाक लाग्ने । ५. बेहोस हुने हुन्छ । एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको कसरी थाँहा पाउँने ? यस्तो समस्या छ वा छैन भनेर सबै भन्दा पहिला नियमित महिनावारी रोकिने वित्तिकै वा गर्भ रहेको थाँहा पाउने वित्तिकै विशेषज्ञकोमा परीक्षण गराउनु पर्छ । भिडियो एक्सरे गरेर हेरेपछि मात्र यसको एकीन गर्न सकिन्छ । तर धेरै महिलाले पछिसम्म पनि स्वास्थ परीक्षण गरेको पाइदैन् । यो एकदमै गलत कुरा हो । यसले गर्भवतीको ज्याननै जाने खतरा समेत हुनसक्छ । बच्चा रहेको ठाँउ फुट्यो भने के हुन्छ ? बेहोस हुने । कसैलाई चक्कर लाग्ने । बान्ता आउने । बढी ब्लिडिङ भैरहने । प्रेसर कम हुने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समयमै सल्यक्रिया गरिएन भने मृत्यु समेत हुनसक्छ । पटक पटक एक्टोपिक भयो भने बच्चा जन्माउन सकिन्छ की सकिदैन् ? एक्टोपिक भयो भन्दैमा बच्चा नै पाउन सकिँदैन भन्ने होइन । यदि सल्यक्रिया गर्नुपरे पनि एउटा ट्युव हुन्छ । ट्युव र ओभरी दुईवटा हुने भएकाले ट्युव एउटा निकाले पनि बच्चा बस्छ तर चिकित्सकको निगरानीमा रहनुपर्छ। यसको उपचार कसरी गर्ने ? १.गर्भ फुटेको छ भने रगतको व्यवस्था गरी तुरुन्त शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । ल्याप्रोस्कोपीको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । २. गर्भ फुटेको छैन भने त्यसको आकार, बिरामीको अवस्था र रिपोर्टहरु हेरेर केही समय पर्खिन पनि सकिन्छ र औषधिबाट पनि गर्न सकिन्छ तर यो भने बिरामीको अवस्थामा भर पर्छ । (डा. श्रेष्ठ ईसान बाल तथा महिला अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)